Dhageyso Beesha Baada Cadde Oo Caleymo Saaratay Nabadoon Cusub. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Beesha Baada Cadde Oo Caleymo Saaratay Nabadoon Cusub.
May 16, 2017 10:21 pm Views: 66
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka Buurweyn oo ah deegaan dhaca wadada isku xirta degmooyinka Buulo-burte iyo Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan waxey beesha Baada Cadde ku caleysmo saaratay nabadoon cusub.
Nabadoonka Cusub ee beesha ay caleymo saaratay ayaa lagu magacaabaa Nabadon Mucalim Yuusuf Mucalim Cabdi Muuse kaasi oo goobta munaasabadda ka jeediyay kalimad muhiim ah.
Munaasabadda waxaa kasoo qeyb galay qeybaha kala duwan ee beesha oo ka kala yimid magaalooyin ay ka midyihiin Beledweyne,Buulo burte,Jalalaqsi iyo Jowhar oo ka kala tirsan gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Marti sharafkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ah Waaliga Wilaayada Islaamiga Hiiraan iyo ugaaska guud ee beesha Ansaarta ah ee Gaaljecel’iyagoona si aad ah ula dardaarmay nabadoonka iyo beesha caleymo saaratay.
Halkan Ka Dhageso Kalimadihii Laga Jeediyay Munaasabadda.
mashallah wasodhaweynayab nabadonka aydoratey waxnleyahay kixaqakuhogamiyo allahkadhigo